Chinyorwa Link Ads Dethrones Google Adsense (pane yangu Blog) | Martech Zone
Chipiri, July 3, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Google Adsense yanga iri nzira yekutanga yekushambadzira mari pablog rangu kubva payakatangwa. Ndinewo Commission Junction kushambadza mune yangu RSS feed, Kontera kushambadzira kwemamiriro mune zvandatumira, uye Chinyorwa Link Ads. Ini zvakare ndinoita Ongororo kuburikidza Ndiongorore uye zvakare uwane izvo zvinowanzoitika Starbucks chipo kuburikidza nePayPal. Wee!
Pamwedzi wakanaka, ndinogona kudhonza $ 300, kure ne $ 10k + iyo John Chow inodhonza pasi, asi ichiri kuremekedzwa mumaonero angu. Iwe unozoona kuti peji rangu repamba rinenge rakachena pane ese kushambadzira. Ini ndaigona kuisa kushambadza kwese kwazviri, asi ini handidi kusundidzira kushambadza kune vashanyi vanodzoka kune yangu saiti kasingaperi. Asi ini ndinoshandisa izvo kushambadzira zvevanhu zvinoitika kuti vandiwane zvisina kunangana, kuburikidza nekutsvaga uye mareferenzi.
Google Adsense yaive, nekure, sosi yangu hombe yemari… kusvika zvino. Chinyorwa Link Ads yakaparadza zviri pamutemo yangu Google Adsense mari yekunonoka, zvakadaro. MunaMay, ndakagadzira madhora mashoma. MunaJune, ndakafananidza mari inofungidzirwa yaipiwa neAdsense - asi ini ndakanga ndisina Google Adsense yakagadziridzwa. Asi muna Chikunguru, ini ndinomira kuunza zvakapetwa zvakapetwa zvakapetwa neZvibodzwa zveMavara pane neAdsense. Wow.
Key to Chinyorwa Link Ads kubudirira ndekwekuti yakavakirwa blog, kwete webhusaiti. Ivo vanotopa plugin kune vashandisi veWordPress kuti iite kunyange nyore. Vashambadziri vanogona kutenga 'zvinyorwa' pane mazwi. Icho chinoshamisira nyore, kune vese blogger uye mushambadzi. Kana iwe ukanyora posvo pane yakapihwa musoro, hazvishamise here kuti iwe unogona kutenga chinyorwa chaunoziva chinotsigira chigadzirwa chako? Mukana wakanaka unoshamisa.
Jul 7, 2007 pa 1: 47 AM
Saiti yangu yanga iripo kwemwedzi mitatu, asi yakagara pakati peGoogle PageRank inogadziridza. Izvo zvine basa here kunyorera account yemuparidzi, kana ini ndinofanira kumirira kusvikira inotevera Google PageRank inogadziridza?
Ndanzwa kuti TLA inoongorora zvekare masayiti asina kutanga abvumidzwa, asi ini ndanzwa zvakare kuti maitiro anogona kutora kwazvo nguva yakareba.
Jul 7, 2007 pa 10: 23 AM
Ini zvechokwadi ndaisabhadhara account yemuparidzi, ini ndaizomirira. Panguva ino, unogona kushandisaGoogle Webmasters kuve nechokwadi chekuti saiti yako irimo. Hongu kuTLA asi ini handina chokwadi nezvenguva yenguva. Ndakaverenga iyi posvo uko blogger yakawana saiti yake kubvumidzwa. Sezvineiwo, iye chaizvo aisatora traffic yaaida kuita yakanaka bhuru. Ini ndaizotarisisa pakutyaira yakawanda traffic. Ini ndinoda kuzviita kuburikidza nekuputika kwekutaura pane mamwe mablog andisina kumbobvira ndashanyira. Ini ndinowedzera kukurukura, handingoti 'hei!'. 🙂 Ini ndinofunga mazhinji mabloggi anoshanyira vatauri. Tora iyo traffic kumusoro uye zvese zvichatevera!
Jul 12, 2007 pa 6: 43 AM
Ini ndakanyorera TLA mwedzi yakati wandei yapfuura asi haina kubvumidzwa. Fungidzira yangu webhusaiti haina kuburitsa yakaringana traffic kana ine yakakwana Feedburner vanyoreri. Handina chokwadi chekuti ndeapi maitiro avanoshandisa pakubvumidza?
Mbudzi 17, 2009 na12: 32 PM
Ini handifunge feedburner vanyoreri ndeimwe yemaitiro, ini ndine vanyori vatanhatu uye ini ndakapinda mukati :).
Yangu pagerank iri 4 zvakadaro, saka pamwe ndosaka ndakapinda…
Pane mumwe munhu ane zano kana iwe uchigona kushandisa TLA uye google adsense pamwe chete?
Jul 13, 2007 na12: 05 PM
Matipi makuru nguva pfupi yadarika pakushambadzira. Ndiri kufunga kuisa mawebhusaiti akati wandei uye kuyedza mvura nekushambadzira.
Gumiguru 14, 2007 pa 10:39 AM
Ndinokutendai nemazano enyu anobatsira. Unogona kundiudza kana zvichikwanisika kushandisa TLA neAdsense mune imwechete webhusaiti? haisi kupokana neGoogle TOS? Waita hako!
Gumiguru 14, 2007 na5: 34 PM
Izvo hazvipesane neGoogle TOS kushandisa zvimwe zvekushambadzira zviwanikwa. Muchokwadi, iwe unowana akawanda mabloggi ane yakajairwa mari inomhanya akawanda masosi
Mbudzi 19, 2009 na1: 59 PM
Ini ndangotanga kushandisa zvinyorwa zvinongedzo kushambadzira, ndichaona kuti zvinhu zvinobuda sei!